IEBC oo hakisay tirinta codadkii laga dhiibtay Kiambaa | Star FM
Home Wararka Kenya IEBC oo hakisay tirinta codadkii laga dhiibtay Kiambaa
IEBC oo hakisay tirinta codadkii laga dhiibtay Kiambaa
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada wadanka ee IEBC ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay tirinta codadkii ay dhiibteen dadweynaha deegaanka Kiambaa ee ismaamulka Kiambuu oo doorasho ku celis ah ka qayb galay.
IEBC ayaa go’aankeeda ku saleysay inuu qalalaase ka dhashay cabasho ka timid musharaxii Jubilee Kariri Njama iyo taagerayaashiisa.
Waxay walaac ka muujiyeen inuu jiro qorsho la doonayo in loola safto Njuguna Wanjiku oo la tartamaya kana tirsan xisbiga UDA.
Hasa ahaate guddiga doorashooyinka ee dalka ayaa arrinkan gaashaanka u daruuray.
Previous articleMusharaxii Jubilee oo ku guulaystay doorashadii ku celiska ee deegaanka hoose ee Muguga
Next articleDHAGEYSO:Howlgal amni xaqiijin ah oo xalay laga fuliyay warta nabadda